နောက် (၅)နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ သူများထက် သာနေချင်ရင် ချမ်းသာနေချင်ရင် ဒီအရာတွေကို လုပ်ပါ – KK Daily News
လူတယောက် အောင်မြင်သွားတယ်၊ ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင် အများစုက ဘာပြောကြမယ် ထင်သလဲ? သူ ကံကောင်းလို့ပါကွာ၊ ဘာတွေလုပ်လို့ ချမ်းသာမှန်းမှ မသိတာဆိုတာကြီးဘဲ။
လူနည်းစုကဘဲ သူဘယ်လို ကြိူးစားခဲ့သလဲ? သူ ဘာတွေ စွန့်လွှန့်အနစ်နာခံခဲ့သလဲ? ဘယ်လို နည်းစနစ်တွေကြောင့် ချမ်းသာခဲ့သလဲ? ဆိုတာ
ကို အာရုံစိုက်ကြတာပါ။ အောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက် ချမ်းသာနေတဲ့သူတယောက်ကို အပြစ်ပြောဖို့ ဝေဖန်ဖို့က လွယ်ပါတယ်။ သူ့လို အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့က ခက်ပါတယ်။
အောင်မြင်ဖို့ ချမ်းသာဖို့အတွက် လျှို့ဝှက် သိုင်းကျမ်းတွေ မရှိပါဘူး။ ကြိူးစားမယ်၊ လဲကျရင် ပြန်ထမယ်၊ အမြင်ရှိမယ်ဆိုရင် တော်တော် ခရီးပေါက်ပါမယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ နောက်(၅)နှစ်နေရင် သူများထက် သာစေမယ့် အချက်တွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီအရာတွေက သင့်ကို ချမ်းသာစေချင်မှ ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူများထက်တော့ ခေါင်းတလုံးသာစေပါလိမ့်မယ်
တရက်ကို ၁၀၀၀ ပုံမှန်စုပါ။ ဒီလောက်ကတော့ လူငယ်တိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အပြင်ထွက်စားတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ၊ ညနေဆိုရင် ဘီယာဆိုင် ထိုင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ပါ။
နောက်တချက်က ဖုန်းဘေ သုံးတာကိူ လျော့ပါ။အိမ်မှာ WiFi တပ်ထားရင် ဖုန်းဘေဖိုး အများကြီး ကာမိပါတယ်။တခုခုဆို ဝယ်ချင်တဲ့ စိတ်ကိုဖျောက်ပါ။
တကယ် လိုအပ်ရင် ဝယ်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ဝယ်ထားလို့ ပစ္စည်းတွေ ပုံနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ မလိုအပ်ဘဲ လျောက်ဝယ်နေရင် တကယ်လိုအပ်တာကြုံလာတဲ့အခါ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်တတ်ပါတယ် အသုံးနဲ့ အဖြုံး ခွဲခြားတတ်ပါစေ
အကြွေးနဲ့ ကင်းရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အကြွေးရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ရှိတဲ့ အကြွေးကို ကျေအောင်ဆပ်ပါ။ အတိုးဆိုတာ လူကသာ အိပ်နေမယ် အတိုးကတော့ မအိပ်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ထင်နေကြတာက ငယ်ပါသေးတယ် အချိန်တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်ပေါ့။မသိကြတာက အချိန်တွေ ကုန်တာမြန်တယ်ဆိုတာပါဘဲ။
လူက ၁ခါလောက် အချိန် ဆွဲတတ်လာရင် နောက် အချိန် ဆွဲဖို့ ဝန်မလေးတော့ဘူး။ ပျင်းလာမယ်၊ ပျင်းလာရင် ဖျင်းလာမယ်
အချိန်မဆွဲပါနဲ့၊ တခါတလေ နောက်မှ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဖြစ်လို့ပါ
ကျန်းမာရေး ကို ဂရုစိုက်ပါ
လူငယ်ဘဝမှာ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မျှတတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားပါ။ အကင်တွေ လျော့စားပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အပေါင်းအသင်းကို ဂရုစိုက်ရမှာပါ
သူဌေး ၁၀ ယောက်နဲ့ ပေါင်းရင် ၁၁ယောက် မြောက် သူဌေးက မိမိပါဘဲ လောင်းကစား သမား ၁၀ယောက်နဲ့ပေါင်းရင် ၁၁ယောက်မြောက် လောင်းကစားသမားက မိမိပါဘဲ မိမိနဲ့ စိတ်တူ ဝါသနာတူတွေနဲ့ ပေါင်းမှ မိမိအိမ်မက်တွေကို သေချာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်၊ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ရမယ်
ခင်ဗျား ဝင်ငွေတွေ သောက်သောက်လဲရှာနိုင်လည်း ချမ်းသာပြီလို့ ဘယ်သူမှ တပ်အပ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ခင်ဗျား ဘယ်လောက် စုထားနိုင်ပြီလဲ?ဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ ရှာသလောက် အကုန် သုံးပစ်နေရင် ဘယ်လိုမှ ချမ်းသာမှာ မဟုတ်ဘူး။အနုပညာရှင် အားကစားအချို့ဟာ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးမှာ မွဲကုန်ကြပါတယ်
အမေရိကန် လက်ဝှေ့ အကျော်အမော်ကြီး မိုက်တိုင်ဆန်ဟာ လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ခဲ့စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၃၀၀ကျော် ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ မွဲပြာကျသွားခဲ့ပါတယ်ငွေကို စီစီစစ်စစ် သုံးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ ငွေကို မလိုတဲ့နေရာမှာ မသုံးပါနဲ့
ငွေရဲ့ အရှင်သခင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။